Auto Ac Compressor Fekitori - China Auto Ac Compressor Vagadziri, Vatengesi
Fekitori yedu ine zvigadzirwa zvekugadzira zvemberi, hunyanzvi hwekugadzira zvigadzirwa, uye kugadzikana kwekugona kugona. Kunyangwe iro chigadzirwa chigadzirwa kana kurongedza, isu takazvipira kupa vatengi izvo zvakanakisa. Pahwaro hwekuvimbana, isu tasimbisa hurefu hushamwari uye kudyidzana nevatengi vedu. Nekuti isu takagadzirira kuenda mamaira ekuwedzera, tine chivimbo chakaringana kuve sarudzo yako yekutanga uye mudiwa zvachose mundima iyi.
12V Auto A / C Compressor gadzira Factory For Suba ...
Brand New AC Compressor pamwe batira For Nissan Juke ...
12V Auto Ac Compressor YeMitsubishi Colt / MITSUBI ...
12v 24v inotakurika Universal Roof Pamusoro vakatasva Rori Sl ...
12V Auto Ac Compressor YeMitsubishi Colt / MITSUBISHI LANCER / LANCER EVOLUTION X / OUTLANDER
Iko volumetric kunyatsoshanda kweiyo rotary vane compressor inonyanya kukwirira, uye iyo rotor inogona kumhanya neyakareba kumhanya, saka iyo firiji inokwanisa. Izvo zvakakosha zvinhu zveiyo rotary vane compressor ndeye silinda block, rotor, main axis, blade, chiutsi vharuvhu, yekupedzisira magumo evhavha, kumberi kwekupedzisira butiro ne clutch uye kutakura kweiyo main axis.
Brand New AC Compressor ine Clutch YeNissan Juke / Nissan Micra IV / Nissan Juke Nismo / Nissan Versa
Basa remotokari compressor ndeyekumanikidza iyo firiji kuti iwedzere kupisa kwayo uye kumanikidza. Panguva ino, tembiricha yefriji yakakwira kupfuura tembiricha iri mukati, uye iyo firiji inotonhodzwa nemhepo kutonhora, uye ipapo tembiricha yakadzikira uye kumanikidzwa kwadzikira. Muchigadzirwa, tembiricha yefriji inoderera uye kumanikidza kunodonha.
12V Auto A / C Compressor Gadzira Fekitori Ye Subaru Impreza / Subaru Stella / Subaru Impreza XV
Iyo mota yemhepo inotonhodza compressor ndiwo moyo weiyi mota mhepo yekugadzirisa mamiriro, iyo inoita basa rekumanikidza uye kuendesa firiji yemhepo. AC compressors akapatsanurwa kuita maviri marudzi: asiri-kusiana uye kusiana kusuduruka. Mhepo inotonhodza compressor inogona kuganhurwa kuita yakamisikidzwa yekushomeka compressor uye inoshanduka yekushomeka compressor zvinoenderana neyakasiyana inoshanda musimboti.
Ac Compressor Gadzira Fekitori yeMazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3
Kunze kwezvikuru zvakakura zvakazvimiririra mota-inodziya mamhepo mayunitsi, akajairika mota air-kutonhodza macomputer akabatana neiyo huru shaft yeinjini kuburikidza nemagetsi emagetsi. Iyo yekumira uye kutanga kweiyo compressor inoonekwa nekukweva-mukati uye kuburitswa kwemagetsi emagetsi clutch.
Auto Ac Compressor uye Clutch Assembly Kugadzira Fekitori YeToyota Passo / Toyota Corolla / Toyota Terios
Rotary vane compressor, inozivikanwawo seye kutsikisa compressor, inova iri mhando ye rotary compressor. Iyo humburumbira yeiyo inotenderera vane compressor ine mhando mbiri: denderedzwa uye denderedzwa. Mune rotary vane compressor ine yakatenderera cylinder, kure-kwepakati chinhambwe cheiyo main axis yeiyo rotor uye pakati peiri humbwa inoita kuti rotor ive padyo nemhepo inlet uye kuburitsa pane yemukati peiri siringi.
Auto Mhepo Inodzora Compressor uye Clutch Assembly YeSuzuki Wagon R / Suzuki Jimny / Alto
Chigadzirwa chedu chigadzirwa chine diki diki saizi, ruzha rwekushanda rwakadzikira, hwakareba hupenyu hwekushanda, mashandiro akanaka ekuita kwekutonhodza kushanda.
Auto Ac Compressor Ye Honda N-BOX / Honda Brio / Honda Jazz
Mota mhepo inodzikamisa compressor ndiyo "moyo" yemotokari mamiriro ekugadzirisa. Kana iyo mota yemhepo inodzora system yashandurwa, iyo compressor inopinda mukuita, kumanikidza uye kutyaira iyo firiji kuburikidza neyakavharwa mweya wekugadzirisa mamiriro.